ရေကြောင်းမီးစက်များထိန်းသိမ်းခြင်း - MECCA Power
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / အဏ္ဏဝါမီးစက်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-09 မူလ:ဆိုက်ကို
၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပင်လယ်ရေစက်များအလွန်အရေးကြီးသည်, ၎င်းသည်၎င်း၏0န်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်အရေမြစ်များကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းထားရမည်နည်း။
အဏ္ဏဝါမီးစက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက်ရေ, ဆီနှင့်ဖုန်နှင့်အမှိုက်များနှင့်လောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့များစုဆောင်းခြင်းမရှိသေးသောရေထုအကွေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုထိခိုက်စေသည့်ဓာတ်ငွေ့များစုဆောင်းခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်အစိုဓာတ်နှင့်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှုသည်ရေကြောင်းမီးစက်များပုံမှန်လေဝင်လေထွက်နှင့်အအေးကိုသေချာစေနိုင်သည်။ တိကျသောနည်းလမ်းများတွင်၎င်းတို့အားသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်အပူပိုင်းချောင်းများကိုအကွေ့အကောက်များသောနှင့်အခြားလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ရန်သင့်တော်သောအကွာအဝေးအတွင်းရှိအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းပါဝင်သည်။
ဆီလက်စွပ်များမှဆီရှိလျှောသောဝက်ဝံများတွင်ဝက်ဝံရှိရေနံသည်အချို့သောရေနံပမာဏကိုသေချာစေသင့်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းအဆီမသောက်သင့်ပါ။ သတ်မှတ်ထားသောအရည်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိရေနံပမာဏနှင့်ပြည့်စုံစွာမဖိတ်ရန်ကူးစက်ခြင်းကိုမစွန့်ပစ်သင့်ပါ။ ဘောလုံးသို့မဟုတ် roller ဝက်ဝံနှင့်အတူအဏ္ဏဝါမီးရှို့များနှင့်အတူ 2000h run သောအခါတစ်ချိန်ကအမဲဆီအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ဖုန်ထူပြီးစိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဝက်ဝံများကိုအသုံးပြုသောအခါချောဆီကိုသင့်လျော်စွာပြောင်းလဲသင့်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာခွဲထားသောအဏ္ဏဝါမီးစက်ကိုမစတင်မီ၎င်း၏ချောဆီကိုဆောင်သောအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါက၎င်း၏ချောဆီကိုစစ်ဆေးပါကမူရင်းအမဲဆီသည်ညစ်ပတ်နေပါကဓာတ်ဆီနှင့်မသန့်ရှင်းမီဆေးကြောရမည်ဖြစ်သည်။ ထမ်းရွက်ခန်းမနေရာ၏ 2/3 ကိုဖြည့်ပြီးအလွန်အကျွံမဖြည့်ပါနှင့်။
စုဆောင်းထားသည့်လက်စွပ်၏မျက်နှာပြင်သည်ချောမွေ့ပြီးဆလင်ဒါများဆက်လက်တည်ရှိသင့်သည်။ အကယ်. မျက်နှာပြင်သည်ကြေးနီအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းအမှတ်အသားများနှင့်အတူ, ကျနော်တို့အမှတ် 00 ကောင်းသောသဲအထည်ကြိတ်ဆုံကိုလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ကြိတ်တုန်းကသဲအထည်ကို arc-shaped သစ်သားအထူကိုစလစ်လက်စွပ်နှင့်သင့်လျော်သောအချင်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသည့် arc-shaped သစ်သားဖြင့်တပ်ဆင်သင့်သည်။ စကားမစပ်, စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကြိတ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ စုဆောင်းထားသည့်လက်စွပ်ကိုအညီအမျှ0တ်ဆင်ရန်အညီအမျှ၎င်း၏ polarity ကိုတစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်အစားထိုးရမည်
1. အဏ္ဏဝါမီးစက်အတွင်း၌ဂရုတစိုက်ရှာဖွေနေသည့်အဏ္ဏဝါမီးစက်အတွင်း၌0င်ရောက်ခြင်း, ဝက်အူ, ကိရိယာ,
2. ရေကြောင်းဖုန်မှုန့်များ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှဖုန်မှုန့်များမှခြောက်သွေ့သောလေထုသို့မဟုတ်သားရေကျားများနှင့်အတူလေထုခြောက်ခုနှင့်အတူခြောက်သွေ့သောလေထုကျားများနှင့်ဖယ်ရှားပါ။ ကွိုင်ကိုမထိခိုက်စေရန်သတ္တု blowpipe ကိုမသုံးပါနှင့်။
3. အဏ္ဏဝါမီးစက်ဝက်ဝံချောဆီကိုစစ်ဆေးပါ။ ချောဆီနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
4. မီးစက်သည်၎င်း၏ primer နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးစက်နှစ်ခုလုံး၏ပုဆိန်များသည်တူညီသောလိုင်းပေါ်တွင်ရှိသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
7. အဏ္ဏဝါမီးစက်များ၏ insulation insulation ခုခံအားကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့် 500V MO မီတာနှင့်တိုင်းတာခြင်း 0.5 သန်းယူရိုထက်လျော့နည်းခြင်းမပြုရ။
MECCA POWER '0]}' s Mirine Generators သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ0န်ဆောင်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံစိုက်သည်။ ကမ်းလှမ်းရန်အဏ္ဏဝါမီးစက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။